AS Ramim’s: haverina ny hasin’ny fanahy maha olona | NewsMada
AS Ramim’s: haverina ny hasin’ny fanahy maha olona
Herintaona izay ny nijoroan’ny fikambanana AS Ramim’s, manana ny foibeny any Ambatolampy any. Tanjon’ny fikambanana ny hanarina sy hampandroso ny firenena, miainga any ifotony. Apetraky ny fikambanana ho fototr’izany fampandrosoana izany ny fanomezana hasina ny maha olona, ny fanahy, araka ny teny fanevany hoe “Ato amiko ny fanahy”. Ny fanahy ao anatin’ny mpikambana tsirairay ihany koa no hery lehibe voalohany manosika azy ireo hitondra ny anjara birikiny.
Sokajin’olona anisan’ny volavolaina manokana hitandro lalan-dava izay fanahy maha olona izay ny tanora. Noho izany, nisy ny asa nataon’ny fikambanana hiarovana azy ireo amin’ny fahalovana. Anisan’izany ny fanarenana ny kianja fanaovana basikety, ao antampon-tanànan’Ambatolampy. Hotanterahina ny alahady 3 febroary izao ny fitokanana izany fotodrafitrasa izany. Lanonana izay hatrehin’ny vahiny manan-kaja samihafa.
Hamaranana ny fotoana, hisy ny lalao basikety, dingan’ny famaranana, sokajy lehilahy sy vehivavy, eo amin’ilay kianja vaovao. Hanome fialamboly ho an’ny tanora sy fanentanana azy ireo tsy hiditra amin’ny tontolon’ny zava-mahadomelina ny tanjona, araka ny nambaran-dRakotomalala Miarintsoa, filoha mpanorinany ny As Ramim’s.
Santatra am-bavarano amin’ny asa fampandrosoana, ao amin’ny ny distrikan’ Ambatolampy ihany io fa mbola maro ny tetikasa kasainy hotanterahina ao. Maherin’ny arivo ny mpikambana ao amin’ny AS, amin’izao fotoana izao. Ankoatra ny ao Ambatolampy, efa manana sampana any Sambava sy Antsirabe ihany koa ny fikambanana ary hiitatra manerana an’i Madagasikara.